Hindiya oo ka laabatey wadaxaajood ay burcad badeeda kula jirtey & markab… – SBC
Hindiya oo ka laabatey wadaxaajood ay burcad badeeda kula jirtey & markab…
Dawlada Hindiya ayaa gabi ahaanba laashay qorshe ay ku doonaysay inay kula xaajootoo shufto badeeda Soomaalida oo ay kala hadli laheyd qorshe la haystayaal isdhaafsi ah.
War ka soo baxay dalwada Hindiya ayaa lagu sheegay inay tahay sharci daro dalabka burcad badeeda ee ku aadan in la haystayaasha Hindida ee ay haystaan ay ku badashaan saaxiibadooda ay gacanta ku hayso dawlada Hindiya.
Sharci yaqaanada Hindiya ayaa ku doodaya inaanu jirin qaanuun dawlada Hindiya u ogaalanaya inay si toos ah ula xaajooto burcad badeeda isla markaana la haystayaal ay is dhaafsadaan maadama aanay aheyn xukuumad ama koox la aqoonsan yahay balse caalamka u aqoonsan yahay damhbiilayaal caalami ah.
Talaabadii wadaxaajoodka ayey dawlada Hindiya waxay ku badashay in ay markab dagaal & ciidamo u dirto xeebaha Soomaaliya si xoog loogu soo furto todobada qof ee muwaadiniinteeda ah ee ay haystaan shufto badeeda Soomaalida.
Lama oga jawaabta ka imaan karta hawlgalka dawlada Hindiya ay sameynayo ee ka dhanka ah burcad badeeda ee la xiriira soo badbaadinteeda muwaadiniinteeda, iyadoo goor sii horeysay dawlada Mareykanka ciidamadeeda badda ay ku guuldareystey soo badbaadinta afar muwaadin oo Mareykan ah oo ay haysteen shufto badeeda, kuwaasi oo ku dhintey hawlgalakasi lagu doonayey in lagu soo badbaadiyo.